Ahoana ny fanatsarana ny fiainana bateria rehefa milalao Pokémon GO | Androidsis
Torohevitra roa hanatsarana ny fiainana bateria rehefa milalao Pokémon GO
Manuel Ramirez | | bateria, About us, Pokémon Go
Tonga ihany i Pokémon GO ary nivoaka hihaza an'ireo Pokémons ireo izahay, hikaroka ireo vavahady ireo ary hiady amin'ireo gym. Tsikelikely dia ahitantsika izay novolavolain'i Niantic Labs sy Nintendo hahatsapany izany ny bara baterian'ny findainay midina amin'ny hafainganam-pandeha izay saika mety hanome aretim-po anao izy io. Ary izahay dia miresaka momba ny lalao video iray izay mampiasa fakan-tsary hihaza bibikely, ny GPS ho an'ny toerana ary ny efijery mavitrika mba hahitana ireo Pokémon izay toa nahagaga anay.
Izany dia mitondra antsika amin'ny a fanjifana batterie be dia be izay kely azontsika atao tokoa. Na dia ny toro-hevitra roa homenay anao aza dia mety hanalefaka amin'ny ampahany ny fihinanana tafahoatra ka tsy dia be loatra. Ny soso-kevitro dia raha mpankafy Pokémon ianao ary mikasa ny hahazo finday vaovao dia jereo ny fizakantenany satria io no tena ilainao indrindra eo am-piandrasana anao hanatsara ny lalao mba tsy handany be loatra.
1 Ampandehano ny fiasa bateria ao amin'ny fikirana Pokémon GO
2 Mividiana banky herinaratra
3 Safidy hafa
Ampandehano ny fiasa bateria ao amin'ny fikirana Pokémon GO
Manana safidy mahaliana tokoa izahay amin'ny lalao iray ihany izay heverina fa hamonjy bateria amin'ny fihinanana 40% latsaka. Tsy dia betsaka ny zavatra fantatra momba an'io endri-javatra io, saingy heverina fa manatsara kokoa ny fampiasana tsy tapaka izay ataon'ny GPS an-telefaona sy ny toerana ihetsehany miaraka amin'ny fifandraisana data.
Tsindrio ny bokotra mena sy fotsy afovoany
Avy amin'ny efijery manaraka izay idirantsika ireo safidy eo amin'ny zoro ambony ambony
Mampihetsika ny safidy "Mitsitsy bateria" isika
Manana ny safidintsika isika vonoy ny hovitrovitra izay mety ho tonga ihany koa hamonjy bateria sasany, saingy amin'ny isan-jato ambany dia ambany milaza ny marina.
Mividiana banky herinaratra
Tsy hanao hadalana aho mahazo banky herinaratra mampifandray azy amin'ny findainao finday rehefa mandeha mihaza amin'ny Pokémon GO. Heveriko fa io no torohevitra tsara indrindra azo omena dieny izao eo am-piandrasana ny hamoahana ny akanjo azo avela izay mety hahafahantsika tsy hampiasa telefaona be loatra hihaza. Na dia afaka manamarina izany aza izahay rehefa avoaka, izay tokony ho rehefa natomboka eran'izao tontolo izao ny lalao video.
Ny fananana banky herinaratra iray na maromaro dia hanampy anao tsy hiankina amin'ny batterie finday, ankoatry ny zava-misy fa amin'izao fotoana izao dia afaka mahita ny sasany amin'ny vidiny lafo ianao. Fantatro fa tsy toerana ahafahanao miova amin'ny findainao izy io ary zavatra ara-batana izy io, saingy izany tokoa inona no mahazo an'i Pokémon GO dieny izao. Tsy maintsy marihinao ihany koa fa avoaka isam-paritra izy io, ary izany dia satria hizaha toetra ny lalao izy ireo hanandrana hametraka azy io amin'ny toerana tsara indrindra amin'ny fanombohana manerantany.
Ankoatry ny fiandrasana ny azo ampiasaina, ny fividianana finday avo lenta izay manana fahaizana bateria lehibe na fidirana amin'ny banky herinaratra dia misy hatrany ireo torohevitra izay nampiasain'ny ankamaroantsika tamin'ny taona voalohan'ny Android izay nanolorana azy ireo esory ny rindranasa fa tsy dia nampiasa firy izahay, nahenainay ny famirapiratry ny efijery (afaka manampy kely ity) na nesorinay ny Bluetooth raha toa ka nirehitra izahay.
Torohevitra iray hafa koa ny hampiasa fiara toy ny bisikileta ianao Amin'ny alàlan'ny ahafahanao mifindra toerana iray amin'ny toerana hafa ao anatin'ny fotoana fohy indrindra, ankoatry ny fanatanjahan-tena izay endri-javatra tsara indrindra amin'ny Pokémon GO, dia manery ny olona iray hifindra handeha hihaza. Avia, toy ny hoe miaina amin'ny vanim-potoana hafa isika ary hihinana dia tokony hihaza an-tendrombohitra na tendrombohitra.
Na eo aza izany, toa ny nolazaiko ihany, andao manantena Ny Niantic Labs dia mahay manatsara ny fanatsarana ny bateria, satria ho an'ny telefaona toy ny Xperia Z5, izay misotro ara-bakiteny ny bateria dia tsy te-hieritreritra akory aho hoe mitranga ao amin'ny terminal izay mihoatra ny 2 taona na iray izay tsy manana fahaleovan-tena firy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » bateria » Torohevitra roa hanatsarana ny fiainana bateria rehefa milalao Pokémon GO
Snapchat dia mampiditra "Memories", ny fanangonanao manokana ny tantaranao sy ny snaps tianao indrindra